74 qof oo meyd muhaajiriin ah oo ku soo caariyay xeebaha dalka Libya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorld74 qof oo meyd muhaajiriin ah oo ku soo caariyay xeebaha dalka Libya
74 qof oo meyd muhaajiriin ah oo ku soo caariyay xeebaha dalka Libya. [Xigashada Sawirka: Red Crescent/Twitter]
Tripoli-(Puntland Mirror) Haayada Bisha Cas ee Libya ayaa sheegtay in 74 qof oo muhaajiriin meyd ah ay ku soo caariyeen xeebta galbeed ee magaalo xeebeedka Zawiya ee badda Mediterranean.
Afhayeenka haayada Laanqayrta Cas Mohammed al-Misrati ayaa wakaalada wararka AFP u sheegay in meydadku ay soo caariyeen subaxnimadii hore ee maanta oo Talaado ah.
Misrati ayaa sidoo kale sheegay in haaydaha maxaliga ah ay qaadi doonaan meydadka si loogu aaso gudaha magaalada caasimada dalka Libya ee Tripoli.
230 qof oo 74 maanta la helay aysan kamid ahayn, ayaa geeriyooday iyaga oo isku dayayay in ay ka talaabaan Badda Mediterranean si ay u gaaraan qaarada Yurub inta lagu guda jiray sanadkan 2017-ka, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay.
In ka badan 4,500 dad ah ayaa ku naf waayay sanadkii lasoo dhaafay, kuwaasoo doonayay in ay ka gudbaan badda Mediterranean.
October 27, 2016 Qaramada Midoobay oo sheegtay in 3,800 qaxooti ah ay sanadkan 2016-ka ku dhinteen badda Mediterranean-ka